Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jack Harrison Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Jack Harrison na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, Ugbo ala, ndu na ndu nke onwe.
N’aka ozo, anyi n’enye gi nkpumkpu banyere ndu ndu nke Jack Harrison site n’oge o bidoro, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka agụụ ju gị afọ, ndenye ọpụpụ nchịkọta nke Bio ya na foto.
Obi dị m ụtọ, ajọ ụjọ iku mmekorita nke Jack Harrison na Chibuike Nwokocha na oge 2020/2021 EPL ewetala Fans ọ joyụ dị ukwuu.
You ga-ekwenye na ịdapụ na agụmakwụkwọ Man United nwere ike ịme ihe dị otu a Marcelo BielsaNdị otu na Leeds United? N'ikwu ọtụtụ ihe, ka anyị kọọrọ gị akụkọ ndụ ya, bido na nwata.
Jack Harrison Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Bio, aha ya bụ 'Goldie.' Jack David Harrison a mụrụ na 20th ụbọchị nke November 1996 nna ya, John Giblin na nne ya, Debbie Harisson, n'obodo Stoke-on-Trent, etiti England.
Gị onwe gị onye Bekee nwere nwanne na nwanne, agbanyeghị, a maara ya na ọ bụ naanị nwa amụrụ site na njikọ dị n'etiti ndị mụrụ ya.
Mmekọrịta nke nna ya na nne ya mere ka nwanne nwanne Jack, bụ Claudia Harrison na nwanne nwoke nwoke, bụ Cooper mụrụ.
Na-agba akaebe nne ya na papa ya:
O di nwute, Harrison dara n'etiti umuaka ndi umuaka nke igbapu nke ndi nne na nna mebiri. Eziokwu bụ, ndị nne na nna Jack Harrison kewara n'oge ọ dị afọ atọ.
N'ihi nne ya nwere obi ike ma nwee mmụọ siri ike, Harrison nwere ike tolite dị ka ụmụaka ọ bụla na-agbata obi ya.
N'ụzọ dị ịtụnanya, onye Bekee ahụ mepụtara mgbakwunye na-enweghị atụ na football tupu ya enwee ike ịga ije. N'okpuru ebe a bụ akaebe nke nne ya na-achikota Biography nke Jack Harrison's Childhood. N'okwu ya;
“Ọ malitere ije ije na ọnwa 9, na oge ọ dị afọ abụọ; ọ malitere iji obere bọọlụ ya na-agagharị.
N'oge ahụ, ọ na-eji bọl ya dinara ala, ọ na-ehi ụra mgbe niile.
Ọ ka bụ nnukwu onye na-arahụ ụra. Ma m na-ahụ ya ka ọ na-awagharị, na-achọ bọl ya n’abalị. ozigbo o biliri, ọ na-eji bọl ya mgbe ọ bụla n'ụkwụ ya saa ya ụra.
Ezigbo ezinụlọ Jack Harrison:
N'ịbụ onye nne na-azụ ụmụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu dịka onye inyeaka onwe ya zụlitere nyere onye ọkpụkpọ Bekee nkezi Ndụ site na nwata.
N'oge ahụ, Ezinụlọ ya biri dị ka ezinụlọ ọ bụla dị n'etiti. Ha bụ ụdị nke nwere ike ijikwa obere ego ha. Eziokwu bụ na Harrison agaraghị achọ karịa ihe nne ya mere ya.
Ezinaụlọ Jack Harrison:
Site na ọkwa ya na nkà na football, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na England na America agaghị amata ya dịka nke ha. N'ezie, Harrison bụ onye mba Bekee site na ịmụ nwa. O nwetakwara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ US na 2017.
… Ebe amụrụ Harrison, a ma ama Stoke-on-Trent maka mmepụta ọkpụite na-emepụta ihe. Obodo a bu ulo oru ndi ozo n’England.
Jack Harrison Akụkọ nke Football:
Dị ka n'ụgbọ mmiri, obere Goldie nwere mmalite dị ala. N'otu aka ahụ, Jack malitere njem njem football ya na 6, mgbe ọ zụrụ azụ na Liverpool Football Academy.
Ka ọ na-erule oge ọ bụ 8, Harrison na-eto eto abanyela na Manchester United Academy na-enwe olileanya igwu egwu maka otu klọb otu ụbọchị. Nwere ike ịhụ ya n'okpuru?
N'ịbụ onye nsogbu ngwa ngwa nke nwatakịrị ya na-ata ahụhụ nke na-abanye ụgbọ oloko na-aga United ugboro anọ n'izu, nne Harrison kpara ụzọ dị mma maka ya.
Rio Ferdinand Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nke mbu, Debbie Harrison choro uzo kachasi kwenye igwa nwa ya okwu. N'ihi ya, ọ gara leta Manchester United Academy. N'ikwu okwu banyere okwu siri ike, o kwuru otu oge;
“Otu ụbọchị na ebe nkuzi nke United, m dọtara Harrison n'akụkụ, anyị lere foto niile dị na mgbidi nke ndị ntorobịa na-agbada.
Ajụrụ m nwa m nwoke, ị maara otu n'ime ndị egwuregwu a? Ọ zara; mba. Mgbe ahụ, agbalịrị m ịkọwara ya na n'ihi na ị nọ n'ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ, ọ gaghị ewe gị ebe ọ bụla. ”
Jack Harrison Ndụ Ndụ Mmalite:
N'ikpeazụ ịghọta na ihe egwu ya ga-efunahụ ya, nwa okorobịa bekee ahụ edara ntị n'okwu nne ya.
N’oge ahụ, nne Harrison nwetara enyemaka mgbe ọ chọtara ya ebe ọ nọ na Berkshire School na Sheffield, obodo dị na Massachusetts, United States.
Ọ ga-amasị gị ịmata na ezinụlọ Jack Harrison mere ihe dị ka $ 50,000 kwa afọ iji kwụọ ụgwọ mmefu ụlọ akwụkwọ ya.
Oge a mere mgbe ọ dị afọ 14. Ọ bụ oge Harrison hapụrụ ụmụaka niile na Academy iji malite ụzọ ọhụrụ na United States.
Ọ bụrụ na ahụ erughị ya ala n'ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ya, nkwekọrịta ahụ bụ ịgwa nne ya nke na-enweghị ike ịkwado ya na United States.
Mgbe ị bịarutere Berkshire (Obodo dị na Massachusetts, USA), Harrison kụrụ nne ya n'abalị mbụ ya na nkwupụta ndị ahụ;
Mama, ahụrụ m ya n'anya ebe a. Ndị squir dị oke!. Ngwakọta egwuregwu na agụmakwụkwọ, nwata nwoke ahụ mere nke ọma na ụlọ ọhụrụ ya.
Jack Harrison Biography- tozọ a ma ama Akụkọ:
N'okwu nke onye na-eme ngwa ngwa, ịkwaga Berkshire nyere ya ohere karịa ka okike nwee ike ịgba bọl.
Harry Kewell Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Eziokwu bụ, Harrison chere ọtụtụ nrụgide ihu mgbe ọ nọrọ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Man United. N'oge ahụ, ọtụtụ ụmụaka ji anya mmiri mechie ụfọdụ ọzụzụ ha.
O siri ike onye ọ bụla ịghọta mmetụta nke mmezu ọ chere n'ụbọchị ọ natara Gatorade National Player of the Year award na 2015.
Naanị na 19, ọ kwadoro onwe ya dị ka onye ọkpụkpọ egwu. N'otu oge ahụ, ọ nwetara asambodo ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke mere ka ọ nọrọ n'ọnọdụ mmeri.
Na United States, ọ gara n'ihu football na ụzọ ka mma. N'oge 2016 MLS oge, Harrison nwere obi ụtọ malitere igwu egwu na New York FC.
Jack Harrison Successga nke Ọma Akụkọ:
Na-egwuri egwu n'okpuru nlekọta nke Viera na n'akụkụ akụkọ ọdịnala dị ka Andrea Pirlo, David Villa na Frank Lampard nyere ya obi ike karị.
Ikekwe atụmatụ aghụghọ ya na nne ya mechara kwụọ ụgwọ ka ọ na-atụle ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka New York City na 2nd nke June 2016.
You maara?… Harrison mere onye izizi ya maka ndị otu England U-21 na 1st nke Ọktoba 2017. N’ịlaghachi na United Kingdom, ọ sonyeere Manchester City tupu ọ laa na Middlesbrough na mbinye ego.
N'ụzọ na-akpali mmasị, oge ya na Leeds United gosipụtara mmetụ na-enye afọ ojuju ka ha meriri 2019 Championship wee bulie ya na EPL. Lelee oge sitere n'obi.
Mgbe ọzụzụ n'okpuru tutelage nke Marcelo Bielsa, Harrison nwetara 'Enweghị m ike ikwenye ihe a'oge ka o meriri ihe mgbaru ọsọ mbụ ya na Premier League na 12th nke September 2020.
Eziokwu bụ, ihe mgbaru ọsọ ya ghọrọ Leeds ihe mgbaru ọsọ mbụ na EPL na afọ 16. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu (gụnyere vidiyo ya dị n'okpuru), bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Fiorella Arbenz? Jack Harrison hụrụ n'anya:
N’ezie, ndị hụrụ ya n’anya na-achọ mkpa nkekọ pụrụ iche ha na otu onye ga-eme ka ha nwee mmetụta zuru oke.
Maka Harrison, onye ahụ pụrụ iche bụ Fiorella Arbenz mgbe niile, ihe nlereanya na onye nke anọ na-agba ọsọ maka 4 Miss Asia Pacific International.
Obi abụọ adịghị ya, enyi nwanyị Harrison (Fiorella) ji n'aka na ọ ga-akwado ya site na akara n'akụkụ oge ọ bụla ọ dabara iji mezuo oku akara aka.
Ikekwe ị maghị, Fiorella dị ihe dị ka afọ atọ karịa Harrison ma nwee ike bụrụ nwunye ya n'ọdịnihu.
Jack Harrison Ndụ Nke Onwe:
N'ezie, ndị mụ na ha anọkwuru oge bụrụ abụ otuto nke mmụọ ya dị ukwuu.
Iji mee ka anyị nwekwuo nghọta banyere àgwà Harrison, ọ dị ọchị, nwee ọmịiko ma nwee ọgụgụ isi. N'ezie, o ketara àgwà nke akara Scorpio Zodiac.
You maara?… Jack Harrison ji mmiri nweta ihe ma ọ bụ abụọ. Site na nyocha ya na Instagram, anyị chọpụtara na ọ na-enwe ọ inụ na ịga na ụsọ osimiri na mma osimiri. Mgbe ụfọdụ, ọ na-agbanye bọọlụ gbaa gburugburu ebe ndị ahụ.
Ọzọkwa, Harrison gosipụtara ugbu a, gosipụtara ụfọdụ njirimara nwere ọtụtụ akụkụ. Otu oge, ọ na-egwu tenis ma ọ bụ golf, oge ọzọ, ọ nwere ike weghaara azụ ma ọ bụ lelee egwuregwu NBA.
Maka onye ọkpụkpọ na-eme ọfụma, Ndụ nwere ike ịtọ ụtọ ka ọ na-abanye n'ọtụtụ ọrụ.
Ndụ Jack Harrison:
Ee, ịgba bọl ọkachamara pụtara na nwatakịrị ahụ na-enweta nnukwu ego. The payroll 2020 nke Leeds United na-egosi na Jack Harrison na-enweta obere obere karịa Kalvin Phillips.
Site na ụgwọ izu nke £ 45,000, onye Bekee nwere ike ibi ndụ okomoko.
N'ụzọ na-akpali mmasị, nchegbu ya nke ịbanye n'ụgbọ okporo ígwè na Academy azụ n'oge ochie akwụla ụgwọ ka ọ zụtara ọtụtụ ụgbọala dị oke ọnụ na ụlọ. N'ikpeazụ, ọ nwere atụmatụ Net Net nke £ 2.1 Million n'oge ọ na-ede Bio.
Ndụ Jack Jack Harrison:
O doro anya na ịgba alụkwaghịm nne na nna ya nwere ike mebie ụlọ mbụ ya; otu osila dị, onye bekee ahụghị nkekọ nna ya na nne ya.
Ikekwe nsogbu ezinụlọ ya nwere ike ime ka ọ kwụsị inwere onwe ya.
N'akụkụ a, anyị na-ewetara gị AKWTSKWỌ mara mma karịa gbasara ezinụlọ Jack Harrison malite na nne ya.
Banyere Jack Harrison Nne:
Nke mbụ, a na-ekwenye na mama ya mgbe niile n'ihi na ọ bụ ụbụrụ n'azụ atụmatụ ahụ nke kpara ya.
Na-arụsi ọrụ ike iji bulie Jack dị ka otu nne na-azụ nwa na-etinye na Debbie Harrison, atụmanya dị egwu anyị nwere ike ịhụ taa. You maara? W Onye nwere nkà nwere obi ike na nne ya nke na ọ gụrụ ya 'Mma'.
N'ezie, nne Harrison agbaghị akara aka site na igbochi nwa ya ịbanye n'òtù egwuregwu football.
Kama nke ahụ, ọ ji nwayọ were kọmputa ya nyocha ihe ndị ọzọ ga-enyere onye na-eto eto aka ịga nke ọma na bọọlụ. Ka a sịkwa ihe mere Jack ji na-ekwenyekarị na nne ya (Debbie Harrison) maka ọrụ ọ rụzuru. N'okwu ya;
“Enwere m nnọọ ekele ịnọ n'ọnọdụ a, na-enweghị mama m, agaghị m anọ ebe a.
Onweghi uzo m gha eche n’obi iwere uzo ahu dika nwatakiri. Ma nne m emewo ihe dị ukwuu, enwekwara m nnọọ ekele maka nkwado ya. ”
Banyere Jack Harrison Nna:
Dagharị na ájá nke oge iji jiri ikike o nwere bu ihe siri ike na-enweghị nna ya. Dị ka akara aka ga-enwe ya, Harrison nwere ike ketara talent nke nna ya, John Giblin.
Na nkenke, nna Jack Harrison na-egwu bọl na Njikọ nke Staffordshire. Nwere ike ịkọ na Harrison na-akwụ papa ya mgbe ụfọdụ nleta.
Banyere ụmụnne Jack Harrison:
N'ụzọ doro anya, ịgba alụkwaghịm nke ndị mụrụ ya gosipụtara eziokwu ahụ bụ na ọ bụ naanị otu nwa amụrụ site na njikọ ha.
Agbanyeghị, mgbe nna ya na nne ya gachara ụzọ dị iche iche, ọ dị ka ha agafeela site na itinye mmekọrịta ndị ọzọ. N'ihi ya, nne Harrison lụrụ David Harrison ma mụọ nwanne ya nwanyị, bụ Claudia Harrison.
N'aka nke ọzọ, alụmdi na nwunye nna ya sochiri ọmụmụ nke ụmụnne ya abụọ. Ọfọn, onye na-eto eto na-eme ka ndị na-eto eto mara aha otu nwanne nna ya - Cooper.
Banyere ndị ikwu Jack Harrison:
Site na nhụjuanya nile nke ịgba alụkwaghịm nke gosipụtara ìhè ọ ofụ n'ime ezinụlọ ya, nne na nna ochie Jack enweela ike igbanye ọkụ na-enwe ọ happinessụ ọzọ.
Eziokwu bụ na ọnụnọ ha kasiri Debbie obi, onye ghọtara na ọ bụghị naanị ya nọ n'oge nsogbu a. Ka a sịkwa ihe mere Harrison ji nwee obi ụtọ ileta nna nna ya na nne nne ya mgbe ọ bụla o nwetara ohere.
Eziokwu Jack Harrison:
Tupu ịmechie Life Life of the English, lee ụfọdụ eziokwu ga-enyere gị aka ịghọta Jack Harrison's Biography.
Eziokwu nke 1: Nkọwa nwata banyere Wayne Rooney:
N'oge ọ nọrọ na Manchester United, Harrison na ụmụaka ndị ọzọ na-edebanye aha ha n'ụgbọala oyi na-atụ nke ndị otu egwuregwu mbụ. Ọtụtụ oge, Wayne Rooney na-adakarị na njedebe na-ezighi ezi nke egbe.
Eziokwu nke 2: Rygwọ ọnwa na-akwụ ụgwọ na sekọnd abụọ:
Gwa eziokwu, ịchọta ntụpọ na Marcelo BielsaNdi otu emeela ka pọtụfoliyo ya. Ego maara ihe, Jack Harrison so na ndị Top iri kasị akwụ ụgwọ Player na Leeds United. Lee, Nkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa ya n'oge edere Ndụ Ndụ a.
Inwe ego na ego (£)
Kwa Afọ £ 2,343,600
kwa ọnwa £ 195,300
Kwa Izu £ 45,000
Kwa .bọchị £ 6,429
Kwa elekere £ 268
Kwa Nkeji £ 4.5
Kwa nke abụọ £ 0.07
Anyị emeela atụmatụ nke ọma maka ego Jack Harrison na-enweta ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatara kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Jack Harrison's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 3: Anu ulo:
Zọ kachasị mfe iji gbanwee ọnọdụ gị bụ iwepụta oge kwa ụbọchị iji lekwasị anya n’ihe ndị dị mfe na-ewetara gị ọ .ụ.
Gbaso ụkpụrụ a, Harrison nwere ezigbo mmasị n'ebe nkịta ya nọ. Dị ka Ollie Watkins, ọ na-ewekarị foto ya na anụ ụlọ ya ma kesaa ha na Instagram.
Eziokwu nke 4: FIFA stats:
N'iji ya tụnyere ogo ya na ikike ya, ị ga-achọpụta na onye Bekee ka nwere usoro aghụghọ ya. Dị ka Curtis Jones, ọ na-anọ nke ọma maka dribbling. Jack na-enwekwa ọganihu dị otú ahụ na kpakpando agụmakwụkwọ Chelsea mbụ, Tariq Lamptey.
Manhapụ Man United ka ọ banye na Premier League ga-anọgide na-abụ akụkụ kachasị ukwuu nke Bio.
Ọ bụrụ na Jack Harrison nọrọ na United, ọ gaara eme ya na ndị otu klọb dịka Marcus Rashford, onye nọ otu afọ n'okpuru ya azụ na Academy? Anyị enweghị ike ịmata azịza ajụjụ a.
Agbanyeghị, Harrison Life Story ga-egosipụtakarị ihe egwu dị egwu nke otu n'ime nne na nna ya mere iji hụ na ọ ga-eme nke ọma n'egwuregwu bọọlụ.
N'ezie, Ezinụlọ ya na-eme mmeri ya. Ọzọkwa, nne ya na nna ya, ọ bụ ezie na ha kewapụrụ onwe ha, ga na-akwado ya mgbe niile n'ụzọ ntakịrị ha.
Daalụ maka ịgụ Biography nke Jack Harrison. Buru n'uche na Lifebogger, anyị na-agbasi mbọ ike imeju ọchịchọ gị site na akụkọ akụkọ ziri ezi nke ndị egwuregwu bọọlụ. Kedụ ihe bụ uche gị gbasara Harrison's Career Story?
Aha n'uju: Jack David Harrison
Aha Nick: Goldie
Ụbọchị ọmụmụ: 20th November 1996
Ebe amụrụ onye: Stoke-na-Trent, England
Nna: John Giblin
Nne: Debbie Harrison
Ụmụnne: Claudia Harrison (nwanne)
Enyi / Nwunye: Fiorella Arbenz
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 2,343,600
Ezigbo Net: 2.1 Nde
Ihe omume: Azu, na-egwu Tenis, golfing na njem
Ọkachamara: Onye nyochaa
elu: 1.75m (5 ụkwụ 9 na)